फोटोमा हेर्नुहोस् - वा ! मानिस र घरपालुवा जनावरको प्रेम - Lokpath Lokpath
२०७७, ३२ जेष्ठ आईतवार १७:०४
फोटोमा हेर्नुहोस् – वा ! मानिस र घरपालुवा जनावरको प्रेम
प्रकाशित मिति : २०७७, ३२ जेष्ठ आईतवार १७:०४
काठमाडौं – तपाई जनावर पाल्न कत्तिको सौखिन हुनुहुन्छ ? संसारमा त्यस्ता मानिसहरु पनि छन् जसको साथी जनावर हुन्छ । मान्छे होईन । भनाईको मतलब के हो भने उनीहरु घरपालुवा जनाबर खासगरी कुकुर बिरालासँग यतिधेरै स्नेह राख्छन् कि त्यो अलौकिक हुन्छ ।
ईन्टरनेट र विभिनन अनलाईन साईटमा भेटिएका त्यस्ता फोटाहरु यहाँ प्रस्तुत गरीन्छ जहाँ आफूले पालेका जनावरसँग असिम प्रेममा डुबेका छन् मालिकहरु । उनीहरुको क्याप्ससहित फोटाहरु :
1. मेरो बुबाको कुकुर रियो । र उ १४ वर्ष पुगिन् । केहि अगाडी मात्रै उनले आँखाको ज्योति गुमाईन् । तर हरबखत बुबाको खुट्टामा झुण्डिएर उ यताउता घुम्दछे । र मम्मीले बुबाको लागि मिल्ने किसीमको टिसर्ट किनीदिनुभयो ।
2. मेरो प्रेमिकाको कुकुर ६ वर्षको लाग्यो ।
3. सुनौलो लूबी, मान्छेलाई अँगालो हालेर प्रेम दर्शाउँछ ।
4. उसको फेस क्रयाक भएर बाँगिएको छ । तर मलाई केही फरक पर्दैन । उ मेरो बेस्ट साथी हो ।
5. उहाँ भिज्नुभएको किन थाहा छ ? त्यो सानो हाँसलाई बचाउन ज्यान जोखिममा हालेर पुलमा हाम्फाल्नुभयो । वा ! प्रेम
6. उ सपनामा मात्रै भुक्छ । उद्धार गरीएको भएर उसको हिस्ट्री राम्ररी थाहा छैन । तर उ खाना खेर फाल्दैन । अच्चमको गुनी छ । तर खानाको लागि जहिलयै ब्याकुल हुन्छ हतारीन्छ ।
7. उनको दोस्रो जन्मदिन प्रिय कुकुरसँग । उनीहरु कत्ति आनन्दित छन् । हेर्नुहोस् न । म नै पुलकित भएँ ।
8. २ वर्षको यो मेरो कुुकुरले उसको वरीपरी मान्छेलाई बस्नै दिएन । २ वर्षपछि मलाई अनुमति दियो तर उ निदाएपछि मात्रै ।
9. सबै हाँसे उ पनि हाँस्यो ।
10. उ यसो गर भन्छ ।
11. आफ्नो मालिकको बेडमा सुस्ताउँदा उनीहरु खुसी हुन्छन् । र मालिकलाई यहीँ कुरेर बस्छन् ।
12. उ चाहिँ मेरो एघार वर्षे कुकुर उसको दाँच पनि छैन । पुछरपनि । तरपनि हम्कीरहन्छ ।
13. उ चाहिँ रेस्टुरेन्टमा बस्छ र पाहुनालाई स्वागत गर्छ ।
14. अहिले उ एक हातले उचालिनसक्नु भएको छ ।
15. मेरो विवाहमा मेरो एउटा बुढो साथी । सेफको गेट अपमा
16. म उसको आँखामा नै जादू देख्छु ।
17. अहो ! प्रेम
18. तपाई जनावरलाई प्रेम गर्नुहुन्न भनेपनि उसको हेराईलाई ईग्नोर गर्न सक्नुहुन्न ।